यस्तो छ तुलसीपुरमा कांग्रेस, एमाले र माअोवादीको जोड घटाउ
पश्चिम तराईको दाङ जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका छन्। साविकको राप्ती अञ्चलको केन्द्रसमेत रहेको दाङका घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरमा अहिले चुनावी सरगर्मी बढेको छ। तुलसीपुरमा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माअोवादी केन्द्र एक्लाएक्लै मैदानमा अाएका छन्।
दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ को सबै भूभाग तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पर्छ।
पहाडबाट झरेका र थारू समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको यो उपमहानगर २०७० सालको संविधान सभा चुनावमा नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेको थियो। यो क्षेत्र मात्र होइन संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेस दाङका पाँचै निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी बनेको थियो। तुलसीपुर त्यही क्षेत्र हो जहाँबाट कुनै बेला कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रहेका खुमबहादुर खड्काले चुनाव जित्थे। त्यसो त एमाले नेताहरू युवराज ज्ञवाली र शंकर पोखरेलको प्रभाव पनि यहाँ कम छैन। तुलसीपुर पोखरेलको गृहनगर नै हो।
पहिलो संविधानसभाको चुनावमा भने तत्कालीन एमाओवादीले दाङका पाँचै क्षेत्रमा जितेको थियो।
७६ हजार ८ सय ९३ मतदाता रहेको तुलसीपुर उपमहानगरमा यिनै तीन दलबीच उपमहानगरको नेतृत्वका लागि प्रतिष्पर्धा छ।
यसपालिको चुनावमा नेपाली काँग्रेसले गेहेन्द्र गिरी, नेकपा एमालेले घनश्याम पाण्डे र माओवादी केन्द्रले शेसुराम भण्डारीलाई मेयर उम्मेदवार बनाएको छ।
कांग्रेस उम्मेदवार गिरी ०५६ सालको निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नं. ४ बाट निर्वाचित भएका थिए। तुलसीपुरमा आफ्नो प्रतिस्पर्धा एमालेसँग हुने तर आफैंले जित्ने गिरीको दाबी छ।
उपमहानगरका १९ वडामध्ये अधिकांशमा कांग्रेस बलियो रहेको उनले बताए।
‘१९ वटै वडा हाम्रो पकडक्षेत्र हुन्, मानपुर र बिजौरीमा एमालेको प्रभाव राम्रो छ त्यहाँबाट हामीलाई भोट कम आउँछ तर अन्त राम्रो छ, त्यसैले मैले नै जित्छु,’ उनले भने।
दाङमा भएका विकास निर्माणका काम कांग्रेसले नै गरेको दाबी गर्ने गिरीले आफूलाई मतदाताले यहाँको नेतृत्व गर्न सक्ने उमेद्वारको रूपमा लिने गरेको बताए। ‘०५६ देखि ०६४ सालसम्म सांसदको हैसियतमा रहँदापनि धेरै विकास निर्माणको काम गरेको हुँदा म यहाँका मतदाताको रोजाइमा पर्छु भन्ने विश्वास छ,’उनले भने ‘२३ साल यता यहाँका जनताको सुखदु:ख र समस्यामा सँगै छु मैले यहाँका जनतालाई बुझेको छु र उनीहरुले पनि मलाई बुझेका छन्।’
एमाले उम्मेदवार पाण्डे २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा तुलसीपुरको उपमेयर निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला उनको उमेर २३ वर्ष थियो। यसपालि पनि एमालेले पाण्डेलाई चुनावको एक महिनाअघि नै उम्मेदवार बनाइसकेको थिय। कांग्रेसले उमेद्वारी दर्ता गर्दा त आफूले घरदैलो सकाइसकेको पाण्डेले बताए।
कम उमेरमै एक कार्यकाल उपमेयर चलाएर गरेका विकास निर्माण र सुधारको आधारमा फेरि आफूलाई मतदाताले रोज्ने उनको अाशा छ।
‘मैले यसअघि पनि चुनाव जितेरै जनताको सेवा गरेको थिएँ त्यो अझैं जनताले भुलेका छैनन् भन्ने कुरा मैले घरदैलो गर्दा पनि थाहा पाएको छु,’ उनले भने, ‘यसले मेयरमा जितेमा केही गर्न सक्छ भन्ने थप विश्वास जनतामा जागृत गराएको छु।’
यसअघिका चुनावमा एमालेले जित्न नसकेपनि अहिले राम्रो आधार तयार भएको उनले बताए।
‘हामी सबै वडाहरुमा जित्छौं,कारण हामीले राम्रोसँग प्रचारप्रसार र घरदैलो गरेका छौं,’ पाण्डेले भने।
उनले तुलसीपुर भित्रका सबै वडा एमालेका पकेट क्षेत्र भएको दाबी गरे। आफूले जित्ने सबैभन्दा बलियो आधार भने एमालेको पक्षमा देशव्यापी रूपमा देखा परेको जनलहरलाई नै मान्छन्।
साविकको तुलसीपुर नगरपालिकालाई स्तरोन्नति गरेर उपमहानगरपालिका बनाइएको हो। पश्चिमको पवन नगर, पूर्वको मानपुर, बिजौरी, दक्षिणपूर्वको फूलबारी र डुरुवा गाविस गाभेर उपमहानगरपालिका बनाइएको हो।
एमाले उमेद्वार पाण्डेले पनि यहाँ आफ्नै जित हुने दाबी गरे।
माअोवादी उम्मेदवार भण्डारी २०६४ मा माअोवादीले पाएको मत फेरि फर्केर अाउने र अाफूले तुलसीपुरको मेयर जित्ने दाबी गर्छन्।उनले वडा नं. १,८,१४,२,१०,११,१२,१३,१७ र १९ वडाहरु बाट आफ्नो पक्षमा बहुमत आउने अाशा रहेको बताए।
०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा जिल्लामा ‘क्लिन स्विप’ गरेको माओवादी ०७० मा आइपुग्दा जिल्लामा निल भएको थियो। ०६४ सालको जनशक्ति हाल पार्टीमा फर्किएको भण्डारीको जिकिर छ।
‘०६४ सालमा संविधान वनाउन नसक्दा ०७० सालमा पार्टीले हारेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले भने संविधान निर्माण र संघीयता कार्यान्वयमा पार्टीले अहम भूमिका खेलेको छ,त्यसले गर्दा माओवादी प्रतिको जनविश्वास फेरि फर्कीएको छ।‘
एमालेमा चरम गुटवन्दी हुनु र काँग्रेसमा एकता नुहुनुको फाइदा आफूले उठाउने पनि उनले बताए। त्यसबाहेक भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्न पनि जनताले अरु दुई उमेद्वाराभन्दा आफूलाई पत्याउने बताए।
‘ल्यान्डफिल्ड साइडको व्यवस्थापनको नाममा ठूलो रकम खर्चेपनि हालसम्म त्यो पुरा हुनुले यहाँको भ्रष्टचार छताछुल्ल भएको छ ’, भण्डारीले भने,‘त्यसैले त्यो सुधार्न माओवादीलाई मतदाताले रोज्नेछन्।’
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार ८, २०७४ ०२:३१:५५